M/weyne Trump ayaa sheegay in ay dhici karto in amir Maxamed uu ka warqabay dilka khashoggi… – Hagaag.com
M/weyne Trump ayaa sheegay in ay dhici karto in amir Maxamed uu ka warqabay dilka khashoggi…
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay dhici karto in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin salman uu ka warqabay dilka Wariye Jamal Khashoggi waxaa dhici karto in aan sidaasi aheyn, wuxuu ku daray in Hay’ada Sirdoonka Mareykanka ay sii wadi doonto qiimeynta macluumaadka la xiriira kiiska.
Faalada Trump ayaa ah tii ugu horeysay oo si rasmi ah uga soo baxdo Aqalka Cad ee ku saabsan dilka Khashoggi, ka dib markii warbaahinta caalamiga ay faafiyeen qiimeynta Hay’ada Sirdoonka Mareykanka (CIA) oo tilmaantay in Maxamed bin Salman uu ahaa qofka bixiyey amarka dilka Khashoggi.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxwaynaha Maraykanka ayaa diiday in uu qaato qiimeyntaasi, sida lagu sheegay bayaankiisa. Trump ayaa sheegay in Washington ay ku tala jirto inay iskaashi la lahaato Sacuudi Carabiya si loo sugo danaha Maraykanka, Israel iyo asxaabteeda gobolka. Trump ayaa sheegay in Congress-ka “xor u yahay in ay qaataan jiho tani ka duwan” ee arrinta Sacuudiga.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ay “u badan tahay in aanan weligeed la ogaanin dhammaan xaqiiqooyinka ku xeeran dilka Jamal Khashoggi.”
“Si kastaba ha ahaatee, waxa Mareykanka xiriirka kala dhaxeeya waa Sacuudi Carabiya,” ayuu yiri Trump.